Who killed Dr Sheekh Axmed Xaaji C/Raxmaa? Here is the answer. - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By MoonLight1, January 3, 2012 in Politics
Beeshe Tanada ******* oo bayaan ka soo saartay dilkii Shiikh Axmed Xaaji
Degmada Galdogob ee gobolka Mudug ayaa shaley galinkii danbe shir ka dhacey ayaa laga soo saarey bayaan ka kooban 9 qodob oo ay beesha Tanade ******* ku cadeysay cidii ka danbeysay dilkii Alle ha u naxariistee Dr. Shiikh Axmed Xaaji Cabdirxman oo horaantii bisha December lagu diley magaalada Bossaso.
Kulankan oo ay kasoo qeyb galeen xubno leh issimo ,cuqaal ,aqoonyahano ,culimo ,ganacsato, dhalinyaro iyo dadweynaha reer Galdogob ayaa si cad beesha Tanade ugu qeexdey baayaan ay kasoo saareen cidii ka danbeysay dilkii Dr. Axmed Xaaji,ka dib baaritaan ay sameeyeen xubno gudiyo oo beesha ka soo jeeda si madax banana dhacdan ugu dabo jirrey tan iyo wixii ka danbeeyey dilkii Shiikh Axmed.
Bayaankan kasoo baxay beesha Tanade waxaa lagu sheegey in dilka Shiikha ay ka danbeeyeen kooxda Alshabaab oo horey qaar badan oo ka mid ah culimada Somalida iyo madaxda dowlada Puntland ugu eedeeyeen in ay kooxdaasi soo abaabushey.
Bayaanka Beesha Tanada ******* ayaa u qornaa sidan:
Bayaan beesha ******** ee ku aadan Dilkii Dr. Shiikh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan Dr. Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo ka mid ah Culimada ugu caansan Somalia waxaa maalintii Isniinta ee ay taariikhdu ahayd 10/01/1433 oo ku beegan 05/12/ 2011 lagu dilay magaalada Bossaso asaga oo sooman maalinta Caashuuraa oo soo tukaday Salaadda Subax meel u dhaxaysa Masaajidka Xassan bin Cali iyo Gurigiisa, Shiikhu wuxuu maalmo ka hor ka yimid Xajka. Beesha ******** waxay ka soo saartay dilkaas foosha xun bayaan ka kooban qodobadan hoos ku xusan:
2) Maamlintii Shiikha la dilay isla goobta duugta waxaa ka hadlay Dawladda Puntland iyo culumada labadubana waxay ku eedeeyeen dilkan ururka Al-shabaab, arintaas beeshu waxay u aragtay qodob lagu deg degay waxayna goa’aansatay inay beeshu samaysato guddi baaritaan oo madax banaan.
3) Guddigu wuxuu baaritaan iyo dabagal dheer ku sameeyay cid kasta oo la tuhmi karo ama raad gali karo iyaga oo kaashanaya dadwaynaha kala duwan oo la biday inay wax ku biirin karaan baritaankan. dadkaas oo kala jooga koonfurta Somalia iyo waqooyigeeda, si xaqiiqada loo gaarana baaritaanka waxaa la siiyey waqti ku filan. Ilaahay fadligii baaritaankii beeshu sida samirka iyo kaadsiiyaha leh u samaysay wuxuu ku dhamaaday guul.
4) Shiikhu wuxuu ummadda Soomaaliyeed ku dhex lahaa dad fara badan oo aad u jecel oo ay ka mid yihiin rag ay wax wada barteen, rag wax ka bartay, qaraabo iyo asxaab kale oo fara badan oo aad uga wada murugooday dilkiisa. dadkaas meel ay joogaanba waxay isku taxallujiyeen, kana qaybqaateen sidii loo aqoonsan lahaa dadkii sheekha dilay, loona soo qaban lahaa, Allaah ha ka abaalmariyo dadaalkoodii.
5) Beesha ******** iyada oo shirqoolka Dr. Sh. Axmed ku ahaa nabar aad u xanuun badan oo lama filaan ah, haddana waxay go’aansatay in ay is xakamayso, wax tillaabo ahna aysan qaadin ilaa ciddii fal dambiyeedkaas gaysatay laga helayo, waxayna ku dhaqaaqday siday arrintaas uga sal-gaari lahayd iyada oo Ilaahay la kaashanaysa waxayna beeshu hubsatay cidda Sheekha dishay iyada oo aan qadaf iyo xad-gudub kale midna ka dhicin.
6) Beesha ******** waxay u caddaynaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta oo dhan in dilkii dulmiga iyo bareerka ahaa ee loo gaystay Dr. Sh. Axmed Xaaji C/raxmaan ay fulisey, kana dambaysey Xarakada Al-Shabaabul Al-mujaahidiin, gaarahaan garabka Amniyaadka ee madaxda u yahay Axmed Cabdi Godane.
7) Beesha ******** waxay go’aan wadajir ah ku gaartay in aysan dulmiga lagu dilay Dr. Sh. Axmed Xaaji kaga jawaabin dulmi kale ee ay aqbasho, kuna raalli noqoto wixii Shareecada Islaamku ku xukunto dadkii maleegay dilka Shiikha, kuwii diley iyo kuwii ku caawiyeyba.
8) Beesha waxay u mahad celinaysaa cid kasta oo ka qayb qaadatay baarista iyo qabashada dambiilayaasha, waxayna ka codsanaysaa ciddii taageero ka gaysan karta qabashada dambiilayaasha dhiman inay arrintaas ka caawiyaan.
9) Ugu dambeyntii Hogaanka Ururka al-shabaab beeshu waxay ka sugeysaa jawaab cad oo ku aadan falka ay geysteen.
Saxiixa Ugaaska,salaadiinta iyo cuqaasha beesha ********
18. Nabadoon Sicciid Faarax NuuxCawdgale_________________
19. C/rashiid MaxamedFaarax (Garawaan)__________________
20. Maxamuud Axmed Maxamed (Ilkadheere)______________
21. Nabdoon C/laahi Jaamac Roorshe____________
This is the downfall of Shabaab when they started to assassinate their own ideological brother who opposed their unislamic shedding Somali blood for political gain. Dr. Ahmed (AUN) was on of the most pious muslim scholars anywhere in Somalia and I hope he is the last casualty of the shabaab movement.